AUSLOGICS BOOSTSPEED 10.0.9.0 FREE DOWNLOAD - MMEMME NYOCHA - 2019
Mgbe ndị ọrụ na-ajụ onwe ha otú e si agbanwe asụsụ n'asụsụ, na 99.9% nke ikpe ọ bụghị ihe na-agbanwe nhazi keyboard. A na-eme nke ikpeazụ ahụ, dịka a maara nke ọma, site na otu nchikota n'ozuzu usoro - site na ịpị ALT + SHIFT ma ọ bụ CTRL + SHIFT, dabere na ihe a họọrọ na ntọala asụsụ gị. Na, ma ọ bụrụ na ihe niile dị mfe ma doo anya site na ịgbanwuo nhazi, mgbe ahụ na-agbanwe asụsụ ogbi ihe niile bụ ntakịrị ihe mgbagwoju anya. Karịsịa ma ọ bụrụ na Okwu ị nwere interface na asụsụ ị na-aghọtaghị.
N'isiokwu a, anyị ga-eleba anya iji gbanwee asụsụ ogbi n'asụsụ Bekee na Russian. N'otu oge ahụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịrụ ọrụ ahụ, ọ ga-adị mfe karị. N'ọnọdụ ọ bụla, isi ihe na-echeta bụ ọnọdụ nke isi ihe ịhọrọ (nke a bụ ma ọ bụrụ na ị maghị asụsụ ahụ). Ya mere, ka anyi bido.
Gbanwee asụsụ ogbi n'usoro ihe omume ahụ
1. Open Okwu na gaa menu "Njikwa" ("Njikwa").
2. Gaa na ngalaba "Nhọrọ" ("Nhọrọ").
3. Na window ntọala, họrọ "Asụsụ" ("Asụsụ").
4. Pịgharịa gaa na window windo "Egosipụta Asụsụ" ("Asụsụ okwu").
5. Họrọ "Russian" ("Russian") ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ ịchọrọ iji na mmemme dị ka asụsụ ogbi. Pịa bọtịnụ ahụ "Debe dị ka ndabara" ("Default") dị n'okpuru window nhọpụta.
6. Pịa "OK" imechi windo "Nhọrọ"malitegharia ngwa site na ngwugwu "Office Microsoft".
Rịba ama: A ga-agbanwe asụsụ ogbi ka ịhọrọ maka mmemme niile gụnyere na ngwugwu Microsoft Office.
Gbanwee asụsụ ihuenyo maka nsụgharị dị iche iche nke MS Office
Ụfọdụ nsụgharị nke Microsoft Office bụ ihe efu, ya bụ, ha na-akwado naanị otu asụsụ ogbi ma a pụghị ịgbanwe ha na ntọala. Na nke a, ị kwesịrị ibudata ụdị asụsụ dị mkpa site na weebụsaịtị Microsoft ma wụnye ya na kọmputa gị.
Download asụsụ mkpọ
1. Pịa na njikọ n'elu na na paragraf "Nzọụkwụ 1" Họrọ asụsụ ịchọrọ iji na Okwu dị ka asụsụ ntụgharị asụsụ.
2. Na tebụl nke dị n'okpuru window nhọrọ nhọrọ, họrọ nsụgharị ibudata (32 bits ma ọ bụ 64 ibe n'ibe):
3. Chere ruo mgbe ebudatara asụsụ pack na kọmputa gị, wụnye ya (iji mee nke a, na-agba ọsọ faịlụ ahụ).
Rịba ama: Echichi nke asụsụ mkpọtụ na-ewere ọnọdụ na-akpaghị aka ma were oge ụfọdụ, n'ihi ya ị ga-echere ntakịrị.
Mgbe edechara asụsụ ahụ na kọmpụta, malite Okwu ma gbanwee asụsụ ogbi, soro ntuziaka ndị akọwapụtara na ngalaba nke mbụ nke isiokwu a.
Ihe omumu: Chepụta Checker na Okwu
Nke ahụ bụ, ugbu a, ị maara otú ị ga-esi agbanwe asụsụ ogbi na Okwu ahụ.